Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) (စားချဉ့်ပြန်ရောဂါ) - Hello Sayarwon
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) (စားချဉ့်ပြန်ရောဂါ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) (စားချဉ့်ပြန်ရောဂါ)
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) (စားချဉ့်ပြန်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
အစာအိမ်နဲ့ အစာရေမျိုကြားက အဆက်ကြွက်သားလေး ပျက်စီးလျော့ရဲလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အစာခြေခြင်းစနစ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ နာတာရှည်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများဖြစ်တတ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေမှာပါ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အစာခြေရည်တွေ အစာအိမ်မှတစ်ဆင့် အစာရေမျိုပြွန်ထဲကို ပြန်တက်လာခြင်းကြောင့် အစာရေမျိုအပေါ်ယံလွှာ ပေါက်ပြဲသွားနိုင်ပြီး မသက်မသာခံစားရနိုင်ပါတယ်။
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) (စားချဉ့်ပြန်ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ။
အလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ဂရုစိုက်နေထိုင်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးမေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) (စားချဉ့်ပြန်ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ။
ခံတွင်းချဉ်ခြင်းနှင့်တွဲလျက် ရင်ပူခြင်း တစ်ခါတစ်ရံလည်ချောင်းပူခြင်းပါ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
အစာ၊ အရည်၊ အက်ဆစ်တွေပြန်အန်ခြင်း
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာ မပါဝင်တဲ့ အခြားသောလက္ခဏာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ကိုယ့်ဆီမှာ ရောဂါလက္ခဏာ တစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်အနည်းဆုံး ဒီလက္ခဏာတွေ တွေ့နေရပြီဆိုရင် (သို့) နေ့စဉ်အလုပ်တွေကိုပါထိခိုက်လာပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြသင့်ပါတယ်။ အစားအသောက် အနေအထိုင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ ဆေးဆိုင်က ဝယ်သောက်တဲ့ဆေးတွေနဲ့တင် သက်သာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတရံမှာတော့ထိရောက် တဲ့ဆေးကုသမှုတွေနဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေလိုပါလိမ့်မယ်။
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) (စားချဉ့်ပြန်ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ။
အစာရေမျိုထဲကို အက်ဆစ်တွေသည်းခြေရည်တွေ ဆန်တက်ခြင်းကြောင့်အဓိကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် အစာနဲ့ အရည်တွေဟာ အောက်ဘက်အစာအိမ်ထဲကို သာဆင်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစာကိုမျိုချလိုက်ချိန်မှာ အစာရေမျိုအောက်ခြေကြွက်သား အဆက်လေးကပွင့်သွားပြီး အစာတွေက အစာအိမ်ထဲကိုဝင်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာတော့ပြန်ပိတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြွက်သားလျော့ရဲပြီး ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်လာတဲ့အခါမှာတော့ အစာအိမ်ထဲက အစာခြေရည်တွေ ပြန်ဆန်တက်စေနိုင်ပါတယ်။
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD (စားချဉ့်ပြန်ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အစာအိမ်က ရင်ခေါင်းထဲကို ကျွံဝင်နေခြင်း
အစာအိမ်အတွင်းရှိအာရုံကြောများ ပျက်စီးသွားခြင်းကြောင့် အစာအိမ်ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) (စားချဉ့်ပြန်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်ရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်အခြေခံပြီး ရောဂါအမည်တပ်နိုင်ပေမဲ့ သေချာအောင်တော့ အောက်ပါစမ်းသပ်မှုတွေ ထပ်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
အစာရေမျိုထဲကိုမှန်ပြောင်းထည့်ကြည့်ခြင်း တစ်ခါထဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် အသားစထုတ်ယူခြင်း
ဘေရီယမ်အရည်ကို မျိုချခိုင်းပြီး အစာအိမ်လမ်းကြောင်းအထက်ပိုင်းကို ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) (စားချဉ့်ပြန်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
လူအများစုကတော့ ဖြစ်လာရင်ဆေးမြီးတိုလောက်နဲ့ သက်သာသွားတတ်ကြပါတယ်။
Maalox၊ Mylanta၊ Gelusil၊ Gaviscon၊ RolaidsandTums ကဲ့သို့သော အစာအိမ်အချဉ်ဓါတ်ကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ဆေးတွေ
cimetidine (Tagamet HB)၊ famotidine (Pepcid AC)၊ nizatidine (Axid AR) (သို့) ranitidine (Zantac) ကဲ့သို့သော H-2-receptor blockers အုပ်စုဝင်ဆေးတွေ
lansoprazole (Prevacid 24 HR) နဲ့ omeprazole (Prilosec ၊ Zegerid OTC) ကဲ့သို့သော အက်ဆစ်မထွက်အောင်တားပြီး အနာကျက်စေနိုင်တဲ့ဆေးတွေ အစရှိသဖြင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။
အခြေအနေပိုဆိုးလာတယ်ဆိုရင် (သို့) ဆေးသောက်ပြီးအကျိုးမထူးဘူးဆိုရင် ခွဲစိတ်ကုသခြင်းနဲ့ အခြားသောကုသမှုတွေ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်သုံးကုထုံးတွေက စားချဉ့်ပြန်ရောဂါ ကိုကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပေးသလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံနဲ့အိမ်သုံးကုထုံးတွေက စားချဉ့်ပြန်ရောဂါ ကိုကုသရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးပါတယ်။
• ဆီကြော်စာ၊ခရမ်းချဉ်၊ချောကလက်၊အစပ်၊ ကြက်သွန်စသည့် ရင်ပူစာများရှောင်ခြင်း
• အစာစားပြီးပြီးချင်း တန်းလှဲခြင်း
သင့်မှာမေးခွန်းတွေရှိမယ်ဆိုရင်သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေရဖို့ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
http://www.webmd.com/heartburn-gerd/guide/reflux-disease-gerd-1. Assessed July23, 2016.
http://emedicine.medscape.com/article/176595-overview. Assessed July 23, 2016.
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000265.htm. Assessed July 23, 2016.
Difference Between GERD and Heartburn.
http://theydiffer.com/difference-between-gerd-and-heartburn/. Assessed July 23, 2016.
http://morethanheartburn.com/beyondheartburn/gerd-acid-reflux. Assessed July 23, 2016.